December 7, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha December 7, 2019
(Manchester) 07 Dis 2019. Kooxda Manchester United ayaa guul muhiim ah ka soo gaartay dhigeeda Man City oo ay ku booqatay Etihad Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-aa ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester […]Sii akhriso
(Barcelona) 07 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Barcelona Iyo Mallorca kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Barcelona Iyo Mallorca: Barcelona XI: Mallorca XI: Gool FM.Sii akhriso
(England) 07 Dis 2019. Kooxda Liverpool ayaa markale guul gaartay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3 naadiga Bournemouth oo ay ku booqatay garoonka Vitality, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-aa ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Liverpool. Daqiiqadii 35-aad Liverpool ayaa hogaanka Sii akhriso
Seeraha duurjoogata qaran ee Gerraalle ee gobolka Daawa ayaa wada hawlo lagu hormarinayo dhaqaalaha dalxiiska.
DDS December 7, 2019
Seeraha qaranka ee Garraale (Gerrale National Parka) ayaa Wada Hawlo lagu Hormarinayo Khayraadka dihin ee Seeraha islamarkaana lagu kor loogu qadayo ilaha dhaqaale ee dalxiiska deegaanka. Seeraha duurjoogta Qaran ee gerraale oo ah xarun dalxiis oo kutaalaa gobolka daawa ee DDS ayaa Waxaa la aas-aasay sanadkii 1998T.I, waxaana Maamulkiisa ilaa 2002dii gacanta kuhayey Sii akhriso
(Manchetster) 07 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Man City Iyo Man United kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Man City Iyo Man United: Man City XI: Man United XI: Gool FM.Sii akhriso
Howl wadeenno ka tirsan warbaahinta Qaranka oo Tababar loo soo xiray halka kuwa kalena loo furay+Sawirro
Soomaaliya December 7, 2019
Muqdisho.(SONNA):- Munaasabadan oo isugu jirtay furitaanka tababar aqoon kororsi ah iyo xiritaanka isla tababar kale oo kaasi lamid ah looguna talagay qaar kamid ah wariyeyaasha Warbaahinta Qaranka,kuwa Madaxa bannaan iyo kuwo ka socday dowlad gobaleedyada waxaa ka qeybgalay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya mudane Xildhibaan Aadan Isxaaq Cali, Sii akhriso
Muqdisho(SONNA) Munaasabadan oo isugu jirtay furitaanka tababar aqoon kororsi ah iyo xiritaanka isla tababar kale oo kaasi lamid ah loogunatalagay qaar kamid ah wariyeyaasha Warbaahinta Qaranka,kuwa Madaxa banana iyo kuwo ka socday dowlad gobaleedyada waxaa ka qeybgalay wasiir ku xigeenka warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya mudane Xil Aadan Isxaaq Cali Agaasimaha guud ee Sii akhriso
(London) 07 Dis 2019. Chelsea ayaa guuldarro kala soo kulantay kooxda Everton oo ay ku booqatay garoonka Goodison Park, kaddib markii loogu soo awood sheegtay 3-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-aa ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hor kaceysay kooxda martida loo ahaa ee Everton. Daqiiqadii 5-aad […]Sii akhriso
(England) 07 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Bournemouth Iyo Liverpool kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Bournemouth Iyo Liverpool: Bournemouth XI: Liverpool XI: Gool FM.Sii akhriso
(Madrid) 07 Dis 2019. Kooxda Real Madrid ayaa guul muhiim ah kaga gaartay garoonkeeda Santiago Bernabeu dhigeeda Espanyol, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain. Qeybta horee ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid. Daqiiqadii 37-aad […]Sii akhriso